सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका थरीथरी विचौलिया : भाईभतिजादेखि विनोद चौधरीसम्म ! | Diyopost - ओझेलको खबर सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका थरीथरी विचौलिया : भाईभतिजादेखि विनोद चौधरीसम्म ! | Diyopost - ओझेलको खबर
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका थरीथरी विचौलिया : भाईभतिजादेखि विनोद चौधरीसम्म !
दियो पोस्ट सोमबार, कार्तिक २९, २०७८ | २१:२६:४३
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कारण नेपाल बार एशोशियसनले ईतिहासमा पहिलो पटक भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च परिसरमै आन्दोलन गरिरहेको छ । जबराले मुद्दामा सेटिङ मिलाउनेदेखि झगडियासँग लेनदेन गरेको आरोप बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तथ्यसहित लगाएका छन् ।
जबराले न्यायालयभित्र मुद्दा मिलाउन थरीथरीका विचौलिया खडा गरेको पाइएको छ । केहीदिन अघि दियोपोस्टले मिडिया म्यानेजको नाममा एक विचौलियाले ४ करोड रुपैयाँ लिएर सम्पर्क विहिन भएको खबर प्रकाशित गरेको थियो । एभिन्युज टेलिभिजनका मालिक भाष्कर राज राजकर्णिकारले जबराबाट ६० लाख रुपैयाँ नगद घुस लिएपनि पछि जबराले फिर्ता मागेपछि चेकमा फिर्ता गरेका छन् । तर, उनले दिएको चेक अझै साटिएको छैन ।
मिडिया मिलाउने नाममा मात्रै जबराले करोडौँ खन्याएका छन् । केही मूलधारका मिडिया बाहेक अन्य मिडिया जबराको भ्रष्टाचार प्रकरणबारे चुपचाप छन् । जबराले न्यायालय भित्र सेटिङको जालो नै खडा गरेका थिए । जसको नेतृत्व अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीले गरेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा आरक्षणबाट सांसद बनेका नेपालको एक मात्रै डलर अर्बपति रहेका चौधरी विरुद्ध अर्बौंको नक्कली भ्याट बिल खडा गरि राजश्व छलि गरेको आरोप छ । उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएपनि चोलेन्द्र शम्शेरमात्रै होइन यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले समेत सुनुवाई नै नगरि तामेलीमा राखिदिएका छन् । जबराको कार्यकालमा पनि सुनुवाई हुनु त परको कुरा चौधरीले नै जबराको विचौलियाको भूमिका निभाएको विश्वस्त स्रोतको भनाई छ ।
त्यस्तै प्रधानन्यायधीशका भाई प्रभु शम्शेर जबरा प्रमुख विचौलिया हुन् । उनको विचौलियागिरी यतिसम्म थियो की सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले समेत कुनै मुद्दा आफ्नो इजलाशमा पार्नका लागि भाई जबराकै शरणमा पुग्नु पर्ने थियो । उनले नै मुद्दाको झगडियासँग लेनदेन गर्दै मुद्दा सेटिङ गर्दै आएका थिए । बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरण र भाटभटेनीको नक्कली स्टिकर तथा नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा पनि प्रभुले नै सेटिङ मिलाएका थिए । भाटभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङले प्रभुसँगैको सेटिङका कारण कर छली र नक्कली स्टिकर प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
त्यसो त गुरुङले समेत कतिपय मुद्दाको सेटिङ मिलाइदिन्छु भन्दै आएका छन् । प्रभु शम्शेरले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको ३ सय ४३ विगाह जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा समेत सेटिङ मिलाइदिन्छु भन्दै पार्टनरसिप हत्याएका छन् । धापासी हाइटमा रहेको सुधिर बस्नेतको डेढ अर्ब बराबरको जग्गा गैरकानुनी रुपमा हत्याउने एनआइसी एशिया बैंकसँग समेत प्रभुले नै सेटिङ गरेका थिए । एनआइसी एशिया बैंकका सिइओ रोशन कुमार न्यौपानेले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै भेटेको विवादास्पद घटना समेत बाहिर आएको छ । जबराले न्यौपानेसँग सिधै बार्गेनिङ गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । न्यौपानेलाई ‘कस्तो आदेश ल्याउनुपर्छ म ल्याउँछु चोलेन्द्रलाई पनि म नै मिलाउँछु’ भन्दै ग्राण्डी अस्पतालका मालिक तथा ल्होत्से सहकारीका मालिक दिपक कुँवरले समेत भेटेको स्रोतले बतायो । उनले सुधिरको जग्गा खानकै लागि विभिन्न प्रपञ्च गरेको सर्वोच्चकै एक अधिकारीले बताए ।
धापासीस्थित बस्नेतको जग्गालाई लिएर विवादास्पद मिडिया मालिक रामेश्वर थापाले समेत बैंकका प्रतिनिधि र चोलेन्द्र शम्शेरबीच सेटिङ मिलाउने कोशिस गरेका थिए । तर, थापाको यो तहको विचौलियागिरी देखेपछि बैंककै अधिकारीहरु समेत छक्क परेका छन् ।
जबरा पत्नि रेजी शम्शेर राणाले मुद्दा सम्बन्धी झगडियासँग गरेको शंकाष्पद कारोबारमा समेत विभिन्न विचौलियाहरु सक्रिय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । माइलो भनेर चिनिने बेद प्रसाद काप्रीले अदालतमा हुने झगडीया खोज्ने र प्रधानन्यायाधीशका भाई प्रभु समक्ष पुर्याउने गरेका थिए । क्यासिनो विचौलियाको रुपमा चिनिने माइलोको कुनै व्यापार व्यावसाय विनै करोडौंको सम्पत्ति रहेको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेसँगै रहने माइलो केहीदिन अघि मिडियाहरुमा समेत कति पैसा लाग्छ भन्दै पुग्ने गर्थे । त्यसो त इन्भेष्टमेन्ट बैंक भित्र भएको २ अर्ब बराबरको राजश्व घोटालाको मुद्दा समेत सर्वोच्चमै विचाराधिन छ । यो मुद्दाको पेशी सरिरहेको छ ।
त्यस्तै अर्का विचौलिया राजेन्द्र बजगाइँ झगडीया खोज्ने र प्रभु समक्ष पुर्याउने गतिविधिमा समलग्न थिए ।
शंकाष्पद कालोधनको कारोबारमा समलग्न व्यापारी सुहृदराज घिमिरे पनि जबराका प्रमुख विचौलियामा पर्छन् । यसअघि जबराले आफ्नो पक्षबाट घिमिरेलाई मन्त्री बनाउन समेत प्रस्ताव गरेका थिए । जबराले मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै मुख खोलेका अर्का पात्र दिपक तिमिल्सिनाले एनसेलको करछलीमा अर्बौंको आर्थिक डिल गरेका थिए । विचौलियाहरुबाट उठाइएको अर्बौं रुपैयाँलाई ह्वाइट बनाउनका लागि जबराले विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिका पठाउनेदेखि पिआर दिलाउने र विदेशमै ग्याँस स्टेसन खोल्ने सम्मको गतिविधि गरिएको अधिवक्ता शम्भु थापाले बताए ।
दरबारमार्गमा रहेको एक अनलाइनमा समेत जबराले कालोधन लगानी गरेका छन् । लामा थरका एक व्यक्तिलाई अघि सारेर उक्त अनलाइनमा जबराकै गुणगान गाइँदै आएको छ । उक्त अनलाइनमा एउटै कम्प्युटर ७ लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिएको देखाइएको स्रोतले बतायो ।
जबराबारे केहीदिन अघि बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भनेका थिए,‘चोलेन्द्रको पहिला धनाड्य होइनन् । सामान्य आर्थिक हैसियतका हुन् । हिँडेरै जाने हिँडेरै आउने मानिस हुन् ।’
तर अहिले चोलेन्द्रको अर्बौंको सम्पत्ति छ । भाई प्रभु मार्फत उनले विभिन्न ठाउँमा अर्बौंको सम्पत्ति थुपारेका छ । बानेश्वरमा आइपेक्स मल, हाल निर्वाचन आयोग रहेको भवन पछाडी लिएको अर्बौंको जग्गा र विदेशमा समेत अर्बौं सम्पत्ति लुकाएको स्रोतको दाबी छ ।
जबराको विचौलियाको रुपमा बलाराम सापकोटा ‘बले’को समेत फूर्तिफार्ती छ । क्यासिनो खेलाडीको रुपमा रहेका बलेले सरकारी जग्गा सम्बन्धी मुद्दा प्रभु समक्ष पुर्याउने काम गर्छन् । यस्तो मुद्दा हात पारेपछि प्रभुले आफू अनुकुलका सेटिङवाला वकिल समक्ष लाने र दुवै पक्षसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको एक अधिवक्ताले बताए । जसको पक्षबाट राम्रो पैसा आयो उसैको पक्षमा फैसला गर्ने गरेको उच्च स्रोतले बतायो ।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक कार्की समेत जबराको प्रमुख विचौलिया हुन् । यीनै कार्की मार्फत पछिल्लो समय जबराको पक्षमा माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहेको स्रोतले बतायो । उनले जबराबाट लाखौँ रुपैयाँ लिएर माइतीघरमा आउने आनदोलनकारीलाई हातहातमा पैसा बाँढेको स्रोतको दाबी छ ।
चोलेन्द्रले आफ्नो दाइको छोरो तथा आफ्नै भतिजो रजत राणालाई पनि मुद्दाको विचौलियामा खटाएका छन् । त्यस्तै मिनभवन स्थित गणेश अवालेको अर्बौंको घरजग्गा विभिन्न नक्कली कम्पनि मार्फत हडप्ने जग्गा दले कालु गुरुङले समेत चोलेन्द्रको विचौलियाको भूमिका निभाएको स्रोतले बतायो ।
सोमबार, कार्तिक २९, २०७८ | २१:२६:४३